Daaweyaha Guriga | IOS app | Daryeelka Caafimaadka - daraasad xaaladeed - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Daraasadda Xaaladda: Guriga Daweeye
Hap9 waa codsi si caqli gal ah loo qaabeeyey oo u saamaxaya isticmaaleyaasheeda inay indha indheeyaan dhammaan meelaha xiisaha leh ee hareeraha magaalada ka socda iyada oo gacan laga helayo khariidad ku saleysan fiidiyowga 'Home Homelerler' waa barnaamij aad u kooban oo loo sameeyay asal ahaan macaamiisha si ay u eegaan rugaha caafimaadka iyo daaweeyayaasha magaaladooda. iyo sidoo kale daaweeyayaasha inay la xiriiraan macaamiishooda. Barnaamijku wuxuu siiyaa liis buuxa oo bukaan socod eegtada ah cinwaankooda iyo faahfaahinta xiriirkooda. Daaweeyayaashu waxay kula xiriiri karaan macaamiishooda fiidiyowyo. Bogsiiyaha Guriga waa mid aamin ah oo ammaan ah maadaama aysan u oggolaanaynin qof inuu arko fiidiyowyadaada, ilaa aad adigu aad siiso oggolaansho ay ku sameeyaan mooyee. Barnaamijku wuxuu siiyaa macaamiisha 24/7 inay daawadaan fiidiyowyada hadba sida ay ku habboon yihiin wuxuuna u furan yahay qof kasta oo doonaya inuu isdiiwaangaliyo, sida xarumaha caafimaadka, waxay isku qori karaan barnaamijka si ay u helaan daaweeye. Sidoo kale daaweeyayaashu waxay heli karaan bukaan socod eegtada ay rabaan inay la shaqeeyaan. Aqoonsiyada daweeyayaasha daweynta ee ku xiraya astaantooda koontada isticmaalaha waa la xaqiijiyay. Abka waxaa lagu taageeraa webka iyo dhammaan qalabka macruufka.
App-ka waxa lagu abuuray maangal ku salaysan dhacdo oo aan caadi ahayn abka. Markaa caqabada la kulantay waxay ahayd isticmaalka khariidaynta ku salaysan dhacdooyinka si loo kiciyo hawsha oo loo helo dhacdo, isdhexgalka twilio iyo isticmaalka barnaamijka falcelinta.
The horumarinta used sirdoonka macmal algorithm si looga hortago arrimaha ku jira barnaamijka. Waxay sidoo kale isku darsadeen adeegyada fiidiyowga sida vimeo iyo youtube isla.
Si fudud loo isticmaalo - Nadaafad iyo adeegsi adeegsade isticmaale ayaa sahlaya dhakhaatiirta iyo macaamiisha labadaba inay adeegsadaan barnaamijka iyadoon wax dhib ah la arkin.
Amaan iyo badbaado leh - Iyada oo leh "Bogsiiye" guriga dhexdiisa, cidina ma awoodi doonto in ay daawato fiidiyowyadaada illaa aad oggolaasho bixiso mooyaane iyo sidoo kale aqoonsiyada daweeyeyaasha ayaa la hubiyaa ka hor intaysan xiriirin.
24/7 marin - At Home Healer wuxuu siiyaa isticmaaleyaasheeda xorriyad ay ku heli karaan fiidiyowyada 24/7.